Things you should avoid during pregnancy - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
? ဒါတွေရှောင်စို့ ဗိုက်ဗိုက်တို့ ?
အိမ်ထောင်မကျခင် ဟိုတုန်းကတော့ အစဉ်တစိုက်ကြွေးကြော်ခဲ့တာ My Body – My Rule ပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလိုနေ ကြိုက်သလိုစား ကြိုက်သလိုအိပ် ကြိုက်သလို ကစား ကြိုက်သလို ပျော်ပါးခဲ့ရတာပေါ့။
ခုတော့ အဲ့ဒီ့ My body ထဲမှာ နောက်ထပ် Body သေးသေးလေးနဲ့ ဘေဘီ ပိစိကွေးလေးတစ်ယောက်ရောက်နေပြီတဲ့။ ဒီတော့လည်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တွေကနေ သူ့စိတ်ကြိုက်တွေ ပြောင်းရတော့မယ်။ My Body – ဘေဘီပိစိကွေး Rules တွေပေါ့။
သူ့စိတ်ကြိုက်ဆိုတာထက် ဘာမှမသိနားမလည်ရှာတဲ့ ကလေးပိစိလေး လူ့လောကထဲ အထိအခိုက်မရှိ ကျန်းကျန်းမာမာဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့ သတိထားရှောင်ရှားပေးရမဲ့ အရာတချို့ပါပဲ။
? ဘာတွေရှောင်ကြရမလဲ ???
? ရှောင်ရမဲ့ အစားအစာများ
– Pasturized လုပ်ပြီး ပိုးသတ်မထားတဲ့ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ သစ်သီးဖျော်ရည်ဘူးတွေ
ဒီအစားအသောက်တွေမှာ Listeria ပိုးနဲ့ တခြား အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ပေါက်ပွားနေတတ်ပါတယ်။ Listeria ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးဟာ အချင်းကိုဖြတ်နိုင်ပြီး ကလေးဆီရောက်သွားနိုင်တဲ့အပြင် ကလေးအသက်အန္တရာယ်အထိ ထိခိုက်စေနိုင်တာမို့ ရှောင်ရပါမယ်။
– မကျက်သေးတဲ့ အသား၊ ငါး နဲ့ ဥတွေ
ကောင်းကောင်းမကျက်သေးတဲ့ အသား၊ငါး၊ပုဇွန်တွေပါဝင်တတ်တဲ့ ဆူရှီလိုအစားအသောက်မျိုးတွေမှာ Salmonella နဲ့ Toxoplasmosis လို ရောဂါပိုးတွေ ပါနေတတ်ပါတယ်။ ဥအစိမ်းတွေမှာလည်း Salmonella ပါတတ်တာမို့ ရှောင်ရပါမယ်။
– Mercury(ပြဒါး) ပါဝင်မှုများတဲ့ ငါးတွေ
ငါးသေတ္တာဘူးတွေမှာပါတတ်တဲ့ Mackerel ငါးတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစားများပြီး ပြဒါးဓာတ်ပါဝင်မှုများပါတယ်။ ဒီဓာတ်ကြောင့် ကလေးရဲ့ အကြားအာရုံ၊ အမြင်အာရုံနဲ့ ဦးဏှောက်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေမှာ ပါပါတယ်။ နှလုံးခုန်မြန်စေတဲ့ ဆိုးကျိုးရှိပြီး အချင်းကိုဖြတ်ကာ ကလေးကိုပါ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ တစ်နေ့အများဆုံး 200mg (ကော်ဖီ တစ်ခွက်ခွဲ) ထက်ပိုလို့မရပါဘူး။
‘မောင်တစ်ခွက် မယ်တစ်ပက်’ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ Alcohol က အချင်းကိုဖြတ်ပြီး ကလေးဆီ အရောက်သွားနိုင်ပြီး သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ Fetal Alcohol Syndrome ဆိုတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကလေး ဉာဏ်ရည်မမီတာ၊ အတက်ရောဂါ၊ မဖွံ့ဖြိုးတာ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့တာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ “သား..ကောင်းနေပြီ..တော်ပြီ” ပြောလို့မရတဲ့ ဗိုက်ထဲက ပိစိလေးကို အရက်မတိုက်ကြပါနဲ့။
– ဆေးလိပ် နဲ့ မူးယစ်ဆေးများ
မိခင်အတွက် အဆိပ်အတောက် ဖြစ်သလို ကလေးမှာလည်း နှုတ်ခမ်းကွဲ အာခေါင်ကွဲ၊ လမစေ့ဘဲမွေးခြင်း၊ ပုခက်ထဲ ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးခြင်းစတဲ့ ကြောက်စရာပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်လို့ ဆေးလိပ်သောက်တတ်ရင် ဖြတ်ပါ။
? ရှောင်ရမဲ့ အနေအထိုင် အပြုအမူများ
– ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လှုပ်ရှားမှုအားလုံးရှောင်ပါ။
– ပြုတ်ကျ ချော်လဲစေနိုင်တဲ့ ဖိနပ်အမြင့်စီးတာတွေ ရှောင်ပါ။
– မိခင်အပူချိန်မြင့်မားလျှင် ကလေးကိုယ်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်လို့ နေပူထဲ ကြာကြာနေတာ၊ မီးဖိုနားကြာကြာနေတာ၊ အားကစားပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်တာတွေ ရှောင်ပါ။
– နေမကောင်းလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးဝယ်သောက်တာမျိုး၊ စပ်ဆေးသောက်တာမျိုးရှောင်ပါ။
– လမ်းလျှောက် ရေကူး ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အားကစားနည်းတွေ ရှောင်ပါ။
– ကစားကွင်းတွေက ရိုလာကိုစတာလို တိုက်ကားလို ဗိုက်ကိုထိခိုက်စေမဲ့ ကစားနည်းတွေ ရှောင်ပါ။
– Toxoplasmosis ရောဂါပိုး အန္တရာယ်ရှိတာမို့ အမှိုက်ပုံးတွေ သွန်တာ လှယ်တာ လုံးဝရှောင်ပါ။
‘My Body – ပိစိကွေး Rules’ ကို အနှိုင်းမဲ့တဲ့ မိခင်မေတ္တာတွေနဲ့ ဖော်ဆောင်ရင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းပြည့်စုံတဲ့ ပိစိကွေးလေးတွေရဲ့ ‘အူဝဲ’သံတွေမှာ အမောပြေဖို့ ကြိုပြင်ဆင် ကြပါစို့..။
How to do Skin Care on Beach